ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လက်ထပ်ခြင်းသည်လူငယ်များအတွက်ဖြစ်သလော။ (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
Eastern Economic ဂျာနယ်
ဇွန်လ 2016, အတှဲ 42, ပြ3နာ ၃၊ စစ 317-334
မိုက်ကယ် Malcolm, ဂျော့ခ်ျ Naufal
အိမ်ထောင်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒပြည့်များအတွက်အစားထိုးလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက် impact လိမ့်မည်။ အင်တာနက်ပြန့်ပွားညစ်ညမ်းကာ ပို. ပို. တန်ဖိုးနည်းအစားထိုးဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ကျနော်တို့လူပျိုများအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေပေါ်, အထူးသညျအငျတာနကျအသုံးပြုမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏။ ကျနော်တို့တိုးလာသည်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအဆိုးလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသပါ။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအထူးသတစ်ခုပင်အားကောင်းသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဆာ variable တွေကိုနှင့်ကြံ့ခိုင်စစ်ဆေးမှုများ၏နံပါတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်းပြောင်းလဲမှုများအိမ်ထောင်ရေးအပြုအမူအတွက်ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကိုမှတော့သည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သည်အတိုင်းနှစ်ခုအကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်ဆံရေးဟာသဘာဝမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ 2000 နှင့် 2004 အကြား, အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်း (GSS) ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်မေးခွန်းတွေဆက်တိုက်မေးသောအခါ, ဒါကြောင့်လည်းအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေအပါအဝင်ပြည့်စုံလူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ထိုအကျွန်ုပ်တို့လူပျိုတို့အဘို့အင်တာနက်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအကြားအစားထိုး၏ကြီးမားသောဒီဂရီရှိကွောငျးတှေ့ရ microdata အသုံးပြုခြင်း - အထူးသယေဘုယျအားဖြင့်လေးလံသောအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုမှုနှင့်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှု, လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်အနိမ့်ပါဝင်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ဆာပ variable တွေကိုနှင့်ဤတစ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင်းအကြံပြုအားလုံးသောအားကောင်းစစ်ဆေးမှုများ၏နံပါတ်မဟုတ်, မျှသာလက်ထပ်ယောက်ျားညစ်ညမ်းမှာကိုကြည့်ဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိသော endogenous ဆက်ဆံရေးမျိုး, ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုကြသောယောက်ျားခွဲခြားကြောင်း unobserved ရွေးချယ်ရေးကိစ္စကိုအချို့ကြင်နာ employ ညစ်ညမ်းအသုံးမပြုသူကိုယောက်ျားကနေညစ်ညမ်း။
ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းရယူသုံး၏တိုးပွားလာလွယ်ကူခြင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားဖွဲ့စည်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ကျဆင်းမှုအခြေခံအရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ကြောင်းအခိုင်အမာ။ မူဝါဒချမှတ်လျှင်မြန်စွာဖြစ်ပေါ်နေသောမိသားစုအဆောက်အဦများနားလည်ရန်ရှာခြင်းငှါအဖြစ်, နည်းပညာဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုဧကန်အမှန်ထိုအဆိုင်း၏အရေးပါသောဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ အထူးသမူဝါဒချမှတ်လူမှုဖူလုံရေးများအတွက်အရေးကြီးသော variable ကိုတစ်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်မိသားစုအစီအစဉ်များပြုမူဆက်ဆံသောအတိုင်းအတာအထိ, နှင့်နှစ်ခုအရေးကြီးသည်အကြားဆက်သွယ်မှုကိုအခြေခံနားလည်သဘောပေါက် Web ကို access ကိုပတ်သက်ပွင့်လင်းအများပြည်သူမူဝါဒကမေးခွန်းများကို၏နံပါတ်နှင့်အတူ။